Budata NordVPN maka Windows
NordVPN bụ otu nime ngwa ngwa VPN echekwara maka ndị ọrụ Windows. Mmemme VPN, nke na-abịa na njiri mara mma dịka ịgagharị echedoro, igbochi mgbasa ozi, bandwidth VPN na-akparaghị ókè, usoro izo ya ezo nke ọkwa ndị agha, ịkekọrịta P2P, na-enye oge nnwale nefu ụbọchị 7.
NordVPN, nke na-abịa na njirimara dị elu dịka ngwa ngwa VPN na-enweghị njedebe nke na-enye ohere ijikọ site na 4000 ngwa ngwa VPN sava na mba 60, ntọala DNS omenala, nhọrọ TCP na UDP, na Gbanwee Gbanyụọ nke na-akwụsị ụfọdụ mmemme site na ịnweta ịntanetị na ikpe nke nkwụsị VPN njikọta, NordVPN dị na ekwentị mkpanaaka na desktọọpụ. Nime mmemme/ngwa VPN kachasị amasị.
Ọ bụ otu nime mmemme a ga -ahụ na kọmpụta ọ bụla na mba anyị, ebe a na -eme mkpọchi saịtị. NordVPN, otu nime mmemme VPN chọrọ ọ bụghị naanị ịnweta/banye saịtị egbochi/machibidoro, kamakwa iji nwee ike iji ọrụ anaghị eje ozi na Turkey, iji hụ na nzuzo na nchekwa na netwọ Wi -Fi ọha, yana ịfụfụ nke ọma na ọsọ. - saịtị ndị a na - akparaghị ókè dịka YouTube, na - arịọ ndị ọrụ ọkwa niile. Ọ ga -ekwe omume ijikọ na weebụsaịtị wee pịa otu njiri mara SmartPlay, yana ịnye njikọ sava kacha mma yana njikọta ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ịgbalite atụmatụ CyberSec, ọ bụghị naanị na ị ga -ekpochapụ mgbasa ozi ebe niile, mana a ga -echebekwa gị pụọ nihe egwu dị nịntanetị. E tinyela atụmatụ P2P maka ndị na-ebugo ma budata faịlụ ọtụtụ oge.